Ku rakib Gimp 2.8 Imtixaanka Debian (Wheezy) | Laga soo bilaabo Linux
Thanks to isbarbardhiga Yoyo waan rakibi karnaa Cirridka 2.8 nagu hagida casharka aan ka heli karno xidhiidhkan. Tallaabooyinku waa sahlan yihiin:
1 Ku rakibida ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka ah:
2 Uruurinta maktabadaha lagama maarmaanka ah:
3 Waxaan ka saareynaa Gimp 2.6
4 Waxaan uruurineynaa oo rakibnay Gimp 2.8
Ku rakibida ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka ah:
Indhaha: Tani waxay rakibi doontaa xoogaa ku-tiirsanaan MONO ah, markaa haddii aadan jeclayn tikniyoolajiyadan, waad dhammayn kartaa casharrada 😀
Waxaan ubaahanahay inaan uruurino babl iyo gegl maxaa yeelay nooca aan ku leenahay keydadka Imtixaanka wuu ka hooseeyaa intaas Cirridka 2.8 u baahan yahay.
Uruurinta maktabadaha lagama maarmaanka ah:
Waxaan ka saareynaa Gimp 2.6
Waxaan uruurineynaa oo rakibnay Gimp 2.8
Diyaar. Waa inay shaqeysaa, in kastoo haddii aysan billaaban Gimp Isticmaalidda astaanta ku jirta menu-ka, waxaan ku xallin karnaa sidan:
Waxaan ku darnaa feylkeena ~ / .bashrc Khadadka soo socda:
In kasta oo aan si daacad ah iskuma dayin. Xalka waxaa la i siiyay isbarbardhiga Yoyo wayna kari karaan halkan ka eeg.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ku rakib Gimp 2.8 Imtixaanka Debian (Wheezy)
Waxaan u isticmaalayaa, oo leh buufin cusub iyo ugu dambeyn qaab daaqad keliya! 😀
Ku jawaab leodelacruz
Horumarintu waxay umuuqataa mid cajiib ah, laakiin waxaan sugi doonaa PPA. Sida XFCE-da cusub ee 4.10
Waxaan haystaa dhibaato
«Dimentio gimp-2.8.0 # samee
samee: *** Ma jiro bartilmaameed cayiman oo aan la helin wax faylal ah oo la sameeyo. Sare.
ok ... Waxaan u maleynayaa inaan arki karo waxa dhaca, markaan sameeyo talaabada gegl-0.2.0 markaan sameeyo "samee" waxay igu tuureysaa qaladaad badan iyo kuwa badan "oo ka soo baxaya maaskaro fulana ah" taasi waa ... I ma garan karo waxa dhacaya oo aanan rakibi karin gegl -0.2.0, ayaa leh wax la mid ah oo aan abuuri karin sameys ama wax aad u eg; ^;
elva Waxaan aad ugu boorrinayaa abuurista xirmooyinka oo aan la isticmaalin sameynta & sameynta habka rakibida maxaa yeelay apt ma xamili karo rakibiddaan, in wax LD_LIBRARY_PATH uu ku dambeyn karo inuu noqdo madaxaaga xirmada wareer.
LOL Elva hahahahaha
Horayba waxay ugu jirtaa bakhaarrada Arch !!
Ilaahow xoog isii si aan iskaga ilaaliyo jirrabaadda inaan dib ugu laabto Arch .. LOL !!!
Qeyb ka baxsan qaar ka mid ah 10-15GB oo aad horeyba u leedahay qaanso la'aan adigoon ka saarin debian? Maxaad u sameyn weyday?
Ku rakibida xirmo aniga doqon bay ila tahay ...
Muxuu ku raaxeysanayaa qaabka daaqada keliya, Midnimo waxay ahayd mid mar labaad ku adkaatay nooca 2.6
Ku ordaya tijaabooyinkeyga Debian-ka ee KDE 4.7.4
Faallo ka bixi in xalka ~ / .bashrc si Gimp uu uga bilowdo astaantiisa si fiican ayuu u shaqeeyaa 😉
Waxaan isku dayayaa inaan ku ururiyo osx la'aan x11, waxaan kuu sheegi doonaa natiijada saacado yar gudahood.
Mararka qaarkood waxaan u maleynayaa inaad ka badan tahay dameerka intaad u muuqato xd
Waa inaad wax ka sheegtaa Mac halkan.
laakiin wuxuu ka hadlayey gimp xd
_¬ Offense Dambi maleh, kumana celin doono.
Ma fahmin dagaalkaas waara ee nidaamka….
Hagaag hada waxaan ka qorayaa Mac-kayga si ay ugu muuqato wakiilka isticmaalaha, ala !!!
Aynu ixtiraamno waana nala ixtiraami doonaa 😉
Waan ku taageersanahay, compadre, Linuxeros Maqueros, anaguba waan haynaa, waa inaan midowno 😉
pandev92, waxaan xiiseynayaa inaan soo ururiyo la'aanteed X11-da, markaad haysato waan ku qanacsanahay haddii aad gudbin lahayd
Marka laga hadlayo Geesinimada, ha xisaabin, waxay noqon doontaa xaasidnimo la'aanta haysashada mac, mise waan qaldanahay?
Ok keopety, maanta waan isku dayay laakiin ku tiirsanaanta awgeed ayaan awoodi waayey, waxaan la hadlayaa maqaarka si aan u arko waxay ii sheegaan, waan kuu sheegayaa.
Wixii loo yaqaan 'gimp 2.6' waxaa ku jira xirmada horay loo sii diyaariyay ee ah http://sourceforge.net/projects/gimp-app/files/gimp-app/
bilaa x11 dabiici ah.
Hagaag, mahadsanid, dhegta ayaan u dhigi doonaa.
Waxaad haysataa wax yar oo dhibaatadaas ah, waana inaad sugto inta si rasmi ah loogu daro qaar ka mid ah kuwa wax gala iyo kuwa kale xoogaa sug
Mid baan haystay
Gimp 2.8 Maxaa loogu talagalay?
Markaa qof ayaa kuu sheegi doona waxayna u dhici doontaa sida ku qoran qoraalka kale
dood yar, fayodhowr, kaliya taas :)
Waad kaftamaysaa, sax?
maya. sida iska cad waan ogahay waxa gimp-ka yahay suaashuna waa qoraal ahaan, waxaan rabaa inaan ogaado waxa codsiyada ah ee la siin karo gimp.
Inta ugu badan ee aan arki karay waxay ahayd, ka bilow novice ilaa xirfadle isticmaalaya gimp. Midkoodna aagga xirfaddaasi ma daboolo.
Oo soo ururi ??? Waa hagaag maya, waxaan ku arkay korka oo waan iska dhaafay in aanan haysan waqti badan oo firaaqo ah, waxaan u aaday ikhtiyaarka fudud, rakib fedora 17 beta oo ka soo dejiso bakhaarada.
Hadda tijaabinta waxaan si daacad ah u dhihi karaa inay aad u deggan tahay, ma ogi haddii ay leedahay taageerada 'gpu' laakiin waxay si fiican u maamushaa sawirrada waaweyn. Waxa ay sameeyeen "sifiican ayaa loo qabtay" oo si sax ah ayaa loo abaabulay si ka wanaagsan krita (oo la ildaran masiibada abaabul ee kde) waxayna aad u wanaajiyeen maaraynta midabkooda in badan, maxaa yeelay 2.6 aad ayuu u xumaa. Iyo nidaam xulasho lakab xiiso leh oo ka mid ah awoodaha Photoshop.
Isticmaalka hiwaayadda iyo bilowguhu waa ballaadhan yahay, dib-u-hagaajinta sawirrada caadiga ah, sawirrada sawirrada, naqshadeynta garaafka, sawir ...
Xirfadlaha; Naqshadeynta websaydhka, warbaahinta dhijitaalka ah (fiidiyowga, warbaahinta badan) ama adeegsiga codsiyada dibedda si loogu beddelo feylasha ... Waxaa ku xaddidan la'aanta taageerooyin ka sarreeya, la'aanta astaamaha midabka CMYK ee daabacaadda, iyo waraaqaha midabka ee sawirrada, iwm.
Marka la soo koobo, weli waa waddo dheer oo laga bilaabo xulashada xirfadeed.
Jawaab ku sii furitaanka
Saaxiibkaaga Alberto wuxuu uga fikir duwan yahay Krita:
Saaxiibkay? Hahaha maya! Taabadalkeed, wuxuu igu diiday codbixinno aanan ku raacsanayn ama aanan usheegin inuu qadhaadh yahay ... sifiican.
Taasi waxay tiri, shabakadda si aad u wanaagsan, daabacaadda daabacaadda ma shaqeyneyso, cidina ma dooneyso inay cabirto kumbuyuutar kumbuyuutar oo khatar ugu jira dhoofinta qalab.
Waxyaabaha ku saabsan Krita inay ka sarreeyaan, waxaan u maleynayaa in taasi aan lagu murmin, laakiin waxay leedahay waxyaabo yar yar oo la yaab leh.
Marka ninkaasi faafreeb ayuu ku sameeyaa faallooyinka, ... Hagaag, lama yaabin. Sidii aan kuugu jawaabay maalin dhaweyd, waxaad u baahan tahay inaad hesho faybar badan.
Si kale haddii loo dhigo, Gimp 2.8 waxay kuxirantahay xoogaa MONO ¿. Ama waad fahmi kartaa taas, laga yaabee inay taasi kaliya ku dhacdo in lagu soo ururiyo imtixaanka ...
Hore ayaan ugu rakibay qaab kale laakiin daaqada kaliya ma aysan soo bixin, aan aragno hadii qaabkan uu horeyba sifiican u jiidanaayo 😀 mahadsanid
Sida caadiga ah, waxay ku bilaabmaysaa qaab dhaqameed daaqado badan.
Waa inaad tagtaa "Windows" menu oo aad dhaqaajisaa ikhtiyaarka daaqada keliya.
Markii iigu dambaysay ee aan isku dayo inaan rakibo nooc ka duwan GIMP oo ka duwan kan ay bixiyeen bakhaarrada rasmiga ah, waxa iga dhammaaday GIMP. Ma jirin wado lagu laabto, ama wax lagu nadiifiyo ama waxaba haba yaraatee…. Waan ka dhammaaday GIMP illaa dib-u-dhiggayga xiga. Qoraalkeyga LTS waxba kuma taabanayo…. waa inay jirtaa ilaa LTS-ka xiga. Taasi haddii aysan qaadan waqti dheer inay u muuqato cusbooneysiin.
HAHAHA la mid ah ayaa igu dhacda. Waxaan isticmaalaa Debian (Tijaabinta) iyo ... Waan sugi karaa Gimp 2.8 waxa ay qaadato, anigu kuma degdegayo inaan isku soo ururiyo naftayda
Ma isticmaali kartaa ppa si aad u tijaabiso?
Farsamo ahaan waxaan u maleynayaa inay awoodi karto, dhab ahaantii waxaan u maleynayaa in elav ay ku guuleysatay inay ku rakibto sidan oo kale ... laakiin, waxaan doorbidaa inaanan. Waxaan isku dayaa inaan nidaamkayga ka dhigo mid 100% nadiif ah, oo aan lahayn gaffes ama nooc kasta oo cayayaanka ah ama wax la mid ah hahaha.
Wixii aan u isticmaalo Gimp, dhib kama qabo inaan sugo 1 bil ka badan illaa 2.8 ay galeyso imtixaannada Debian repos
David pinda dijo
Waa inaad rakibtaa qaybta 'libabl devel' si aad awood ugu yeelato inaad si sax ah u soo ururiso gegl-ga
Jawaab David Pineda